किसानले किन्ने वस्तुको मूल्य बढ्ने तर उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य घट्ने ! यस्तोमा किसानको हालत के होला, आफै अनुमान गर्नुस्। - eagronews.com
किसानले किन्ने वस्तुको मूल्य बढ्ने तर उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य घट्ने ! यस्तोमा किसानको हालत के होला, आफै अनुमान गर्नुस्।
By admin १८ चैत्र २०७६, मंगलवार ११:१०
अध्यक्ष, अखिल नेपाल कुखुरापालक किसान संघ
प्रवन्धक, गणेश दाना उद्योग थानकोट
लक डाउन शुरु भएको २,४ दिन निकै समस्या भयो । दानाहरु ल्याउन र कुखुरा बेच्न पनि नसकिने अवस्था थियो । अहिले भने सरकारले सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर दाना ल्याउन र कुखुरा विक्री गर्न दिन थालेको छ । त्यसैले दाना खानै नपाएर कुखुरा मर्छन कि भन्ने अवस्था छैन । उपभोक्ताहरु मासु पसलसम्म जानै नसक्ने अवस्था भएकोले विक्री घटेको छ, तर ठप्पै भएको अवस्था छैन ।
मुख्य समस्या मूल्यको हो । अहिले दानाको लागि मुख्य कच्चा पदार्थको रुपमा रहेका मकै, भटमासको पिना लगायतका वस्तुको मूल्य बढाइएको छ । हिजोका दिनमा मकै प्रतिकिलो ३५—३६ रुपैंयामा पाइन्थ्यो भने अहिले ४५, ४६ रुपैंया पर्छ, त्यस्तै भटमासको पिना ६२—६३ रुपैंया पाइने गरेकोमा अहिले ७२—७३ रुपैंया पर्छ । हरेक सामानको मूल्य त्यसरी बढाइएको छ तर कुखुराको मूल्य भने बढेको छैन, घटेको छ । किसानले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने तर किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य भने घट्ने, यस्तोमा किसानको हालत के होला, आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ।
अर्काे समस्या भुक्तानीको हो । हिजोका दिनमा १२,१५ दिन उधारो चल्थ्यो । तर, अहिले व्यापारीलाई अग्रिम पैसा नपठाएसम्म सामान आउंदैन । समान पठाइदेउ, चेक दिन्छु भन्दा पनि हुदैन रे । अगाडि नै नगद चाहिन्छ, उता किसानसंग बाट भने व्यापारीहरुले उधारोमा लैजान्छन् । नगद तिरेर उधारोमा बेच्नु पर्ने वाध्यताले पनि किसान पीडित भैरहेका छन् ।
अमर सिंह घर्ती
अध्यक्ष नेपाल अण्डा उत्पादक संघ, काठमाण्डौ
प्रवन्धक भीजन एग्रिकल्चर फार्म प्राली काठमाण्डौ
“पशु विभागका महानिर्देशक विचौलियाको प्रभावमा परे”
अहिलेको अवस्थामा विचौलिया मज्जासंग मोटाइरहेका छन्, किसान मरिरहेका छन् । हामीले यस्तो समस्या भैरहेको छ, समाधानको लागि पहल गरिदिनुस भनेर लक डाउन भन्दा अगाडि पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. वंशी शर्मालाई धेरै अनुरोध गर्यौं । तर, उनले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेनन् । सायद उनी विचौलियाको लोभमा परेका छन् । त्यसैले किसानको कुरा पटक्कै सुन्दैनन्, सुनेका छैनन् ।
किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न पाएका छैनन्, बेचे पनि निकै सस्तो मूल्यमा उधारोमा बेच्नु परिरहेको छ । तर, दाना कम्पनी र व्यापारीहरु भने एक रुपैंया पनि एक दिनको लािग पनि उधारोमा दिंदैनन् ।
लक डाउन अगाडि १२,१५ दिन पछिको चेक दिंदा मान्थे, अहिले त हुंदैन रे । नगदै चाहियो, हात हातै चाहियो रे । दाना सकिन लाग्यो, कुखुरा बेच्न पाइएको छैन, बेचे पनि पैसा उठ्दैन, उधारोमा दिनुपर्छ, खोरमा भएका कुखुरालाई के ख्याउं भन्ने अवस्था आइसक्यो, तर दाना कम्पनीहरु भने एक दिन, एक छिन पनि उधारो हुंदैन रे । ल भन्नुस्, अब किसानले के गर्ने ? त्यसैले किसानको अवस्था विचल्लीपूर्ण छ ।
नागार्जुन कृषि फार्म, नागार्जुन काठमाण्डौ
“दानाको चिन्ताले सताइरहेको छ”
लेयर्स कुखुरा पालेकोले विक्रीको चिन्ता छैन । किनकी अण्डा करिब ४५ दिनसम्म विक्री गर्न सकिन्छ । त्यतिन्जेल अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले विक्री नै नभएर छटपटाउनु परेको छैन ।
५ हजार लेयर्स कुखुरा पालेकी छु । संयोगले लक डाउन हुनु भन्दा अघिल्लो दिन दाना ल्याएकोले आजसम्म ढुक्क थिएं । आज दाना मगाएकी छु, आएन भने केही दिनको लागि दानाको मात्रा घटाएर पनि चलाउंछु भन्ने लागेको छ । त्यतिन्जेलसम्ममा पनि दाना ल्याउन सकिन भने के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । केही दिन अघि एक जना दाइले दाना नपाएर एक हजार गाडेको देखेकोले पनि आतंकित भैरहेकी छु । हेरौं के हुन्छ ।
अर्घाखांची एग्रोप्राली रामकोट
“मुख्य चुनौति उधारो”
शुरुका २,४ दिनको तुलनामा विक्री वितरण केही सहज भएको छ । तर, उधारो पटक्कै उठ्दैन, धेरैका पसलहरु बन्द छन् । नयां समान लैजानेले पनि लक डाउन सकिए पछि दिउंला है भन्छन् । यता दाना कम्पनीहरु पनि एक पनि उधारो दिंदैनन्, मूल्य पनि बढाएका छन् । यस्ले गर्दा किसान दोहोरो समस्यामा परिरहेका छन् । यो समस्या कहिले समाधान होला, भन्न सकिने अवस्था नभएकोले थप चिन्ता लागिरहेको छ ।
लकडाउनमा कृषि उद्यमीको समय व्यवस्थापन
लकडाउनमा तरकारी पाइएन चिन्ता नलिनुस्, ९८४३६६१९९० नम्बरमा फोन गर्नुस् चोकमा आइपुग्छ
Binay Thapa says: